शब्दकोश: November 2011
जरुर साथी .. ..
महात्मा भनाउँदाको निन्दा गरेको छु !
नगण्य व्यक्तिलाई तर
तारीफको पुलमा चढाएको छु
तिम्रा महापण्डित मेरो महामूर्ख !
तिम्रो स्वर्ग मेरो नरक !
तिम्रो सुन मेरो फलाम
साथी ! तिम्रो धर्म मेरो पाप !
जहाँ तिमी आफूलाई चलाक सम्झन्छौ
उहाँ म देख्छु तिमीलाई बिलकुल लाटा !
यस्तो व्यङ्ग्यात्मक कविता लेख्‍ने विद्रोही चेतका सर्जक देवकोटालाई सम्झिन कुनै साइत चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । यसैले उनको १०३औं जन्मजयन्तीको एक महिनापछि पनि यो चर्चा गर्दैछु ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, November 26, 2011 1 : Comments
Labels: व्यक्तित्व, स्मरण
यो छातीको गिटार जलिरहँदा
कुन धुनले पो फुक्छ तिम्रो खुसीको मुरली ?
मैं डुबेको इनारमा
घाँटी-घाँटी आएको पानीमा
दिनहुँ तिमी ऐना हेर्छौ
तौलिन्छौ सिन्दूरी जोबन
फाटेको चौबन्दी पनि लालीगुराँस हाँस्छ !
सम्झनाको ढुंगाले अझै ताक्छ निशाना
म भइरहेको हुन्छु शीशा
कुल्चिँदै जान्छौ तिमी
कुर्कुच्चाको आँखाले हेर्दै अलप हुन्छौ
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, November 21, 20117: Comments
रफ्तारको बसबाट Viewfinder
फोटो खिच्ने पनि नशा नै रहेछ । यसपटक अफिसमा ८-१० दिनको बिदा लिएर पूर्वी नेपालतिर लाग्दा यो नशा अझ प्रकट भयो । मैले खिचेका केही तस्बिरमा मन भुलाएका काठमाडौंका साथीहरूले ‘ल, उताबाट राम्रा फोटो ल्याउनू है’ भनेर कोसेली फर्माइश गर्दै बिदाइका हात हल्लाएका थिए । आफू पनि त्यही सुरमा थिएँ । काठमाडौंमा कोठा र अफिस गर्दा पनि ब्याग र खल्तीबाट हत्तपत्त क्यामेरा छुट्दैनथ्यो । साधारण खालको प्वाइन्ट एन्ड सुट क्यामेराबाट कति नै राम्रो फोटोको आश गर्न सकिन्छ र, तर सम्पत्तिको नाउँमा भने झैं आफूसँग त्यही कम्प्याक्ट डिजिटल क्यामेरा छ । सानो आँखाबाट राम्रो र असल दृश्य हेरे जिन्दगीको सार हुन्छ भन्ने उखान मेरो क्यामेराको हकमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पूर्वको यात्रामा पहिलो पटक झन्डै-झन्डै पूर्वी नाकामै पुगेँ यस पटक, झापाको चन्द्रगढी । त्यहाँ एकदिनको बसाइपछि उदयपुर जिल्लास्थित घर फर्किने बेला गुडिरहेको बसबाट खिचेका तस्बिर यस्ता आए -
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, November 18, 2011 8 : Comments
Labels: तस्बिर, यात्रा
जाडो र गलबन्दी
तिमीले दियौ गलबन्दी
छेक्दै छेकेन जाडो
रोकेन तुषारोको ठिही
तिम्रो उपहारको गलबन्दीभन्दा त
सुन्दरी सिरेटोको खिरिलो हिलजुत्ता
घुसेको छ घाँटीको सुरुङभरि
उफ्रिरहेछ शीतलहरको पाइलाले ।
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, November 16, 2011 1 : Comments
लामो समयपछि ब्लगमा झुल्किँदैछु । रहर लाग्दालाग्दै, मन-मगजमा कुरा खेल्दाखेल्दै लेख्‍न नसक्नु/नपाउनु बडो पीडादायक हुन्छ । सचेत प्राणी भएको नाताले मानव मन-मस्तिष्कले सधैं केही न केही भावना र विचारको गर्भाधान गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता भावना-विचारले निकास पाएन भने प्रसव पीडाले रन्थनी छुट्छ र मानसिक दुर्घटनाबाट गुज्रिनुपर्छ ।
यस हिसाबमा हामी भावना र विचारको गर्भ बोकेर एउटा-एउटा निकास (चाहे त्यो सामान्य र नियमित काम होस् कि गतिलो सिर्जना) को दौडमा आजीवन लम्किरहन्छौं । यसर्थ हाम्रो यो यात्रा मधुमास नै हो । तर यहाँनेर मैले मानवीय मधुमासको कुरो गर्न लागेको होइन । हरेक प्राणीको मधुमास हुन्छ, मधुमासकै बगैंचामा तिनको अस्तित्त्वको कोपिला लाग्छ र फुल्छ । हालै गृहजिल्ला उदयपुर जाँदा प्रकृतिको काखमा यस्तै मधुमासको शीतल ओढिरहेका फट्याङ्ग्रा जोडीहरूसँग जम्काभेट भयो । खेतभरि पहेंलपुर धान झुलेको समय, कतै धान काट्न खेताला लागेका छन् । कतै भने धानको बोझ घरमा थान्को लगाउने चटारो छ । धानखेत नियाल्दै हिंडिरहँदा आलीभरि फट्याङ्ग्राको जुलुस कुनै उत्सव मनाए झैं उफ्रिन्छ ।
तस्बिरमार्फत तिनको गोपनीयता मैले यहाँ भंग गरें, पाप नलागोस् । फट्याङ्ग्राको मधुमासको तस्बिर हेर्न भित्र आउनुस् -
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, November 11, 20116: Comments